Android 11 ayaa hadda loo heli karaa Galaxy Note 20 Ultra gudaha Spain iyo dalal kale | Androidsis
Android 11 hadda waa loo heli karaa Galaxy Note 20 Ultra gudaha Spain iyo dalal kale
Mar kasta oo aan cusbooneysiinno qalabkeenna, mid ka mid ah dhinacyada ay tahay inaan marwalba tixgelinno waa arrinta ku saabsan cusbooneysiinta barnaamijyada, maahan oo keliya kuwa la xiriira nidaamka qalliinka laftiisa, Android, laakiin sidoo kale cusbooneysiinta amniga ee ay soo saartay soo saaraha, ayaa cusbooneysiin inta lagu jiro sannadaha ugu horreeya waxaa ka mid ah shaqooyin cusub.
Bartamihii sanadka, iyadoo la soo bandhigayay nooca 'Note 20 range', Samsung waxay ku dhawaaqday inay kordhinayso tirada sanadaha ay ku bixinayso taageerada casriyeynta Android, taasoo la mid ah kuwa ay bixiso Pixel range ee suuqa ku dhacay 2016: 3 sano. Sida boosteejooyinka qaar ee kuyaala xadka Galaxy S, Ogaysiiska wuxuu bilaabay inuu helo Android 11, laakiin markan, horeyba waxaa looga heli karaa Spain, iyo sidoo kale wadamada kale.
Iyadoo la cusbooneysiinayo Android 11 ee Galaxy Note 20 Ultra, lakabka Customized Samsung ee One UI 3.0 ayaa yimid, lakab keenaya warar muhiim ah oo aan horay ugu soo sheegnay qormooyin hore. Muhiimadda cusbooneysiintan waxaa lagu helay xaqiiqda ah in qaabkani u badan yahay kii ugu dambeeyay ee xusuusta kala duwan ee la cusbooneysiiyo, maaddaama sida aan uga faalloonnay qormooyinkii hore, wax walba ay u muuqdaan inay muujinayaan in kala duwanaanshahan uu dhammaaday.
Qorshayaasha Samsung, oo aan la xaqiijin doonin illaa iyo bisha Janaayo 14 (haddii taariikhdan la xaqiijiyo inay soo bandhigto heerka cusub ee Galaxy S21). Xanta ayaa soo jeedineysa in Galaxy S21 Ultra ay lahaan doonto ikhtiyaar ah in lagu daro S Pen, S Pen oo ay u badan tahay in si gooni ah loo iibin doono.
Thanks to ikhtiyaarkan, dadka jecel aaladda xusuusta waxay awoodi doonaan inay sii wataan isticmaalka S Pen-ka xarumahooda, qiimo jaban, maaddaama noocani cusubi uu ka jaban doono kii hore, xitaa marka loo eego kan ugu awoodda badan ee Xusuusin, taas oo , aragti ahaan, dhammaantood waa faa'iidooyin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Android 11 hadda waa loo heli karaa Galaxy Note 20 Ultra gudaha Spain iyo dalal kale
Snapdragon 888 wuxuu dhibco ka badan 750 kun oo dhibic ku leeyahay AnTuTu oo leh iQOO 7